रक्सी पिएपछि किन आउँछ अंग्रेजी ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
रक्सी पिएपछि किन आउँछ अंग्रेजी ?
काठमाडौं, २० वैशाख । मानिसहरु सामान्यतः मदिरा सेवन गरेपछि अंग्रेजी बोल्ने गरेको तपाईले पनि ख्याल गर्नुभएको होला । विशेषगरी गैरअंग्रेजी भाषीहरु मदिरा सेवन गरेपछि अंग्रेजी भाषाको प्रयोग बढी गर्ने गर्दछन् ।
तर तपाई कुनै अन्य भाषामा बोल्ने कोशिस गर्नुहुन्छ भने तब कयौपटक तपाईका साथ यस्तो भएको होला । सही शब्द तपाईले मुस्किलले पाउनुहुनेछ र त्यसको सही उच्चरण गर्न पनि चुनौतिझै हुनेछ ।
तर, यदि तपाईले थोरै मदिरा सेवन गर्नुभएको छ भने अन्य भाषाका शब्द आफै मुखमा धाराप्रवाह निस्कन लाग्नेछ । लवजको खोजी अन्त्य हुनेछ र तपाईको कुरा सरल लाग्नेछ । मानौ कि यो तपाईको मुखैमा छ ।
यो मदिराका विषयमा लिएर कुनै अन्दाजा गरिएको होइन, बरु यस विषयमा एउटा अध्ययन सार्वजनिक भएको छ। साइन्स म्यागाजिन ‘जर्नल अफ साइकोफार्माकोलजी’ मा प्रकाशित अध्ययनका अनुसार थोरै मदिराले अन्य भाषा बोल्न सहयोग गर्दछ ।
यो पनि सत्य हो कि हाम्रो स्मरणशक्ति र ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमतामा असर पर्दछ, यस हिसावमा यो एउटा बाधा हो । तर, अर्कातिर यसले हाम्रो हिचकिचाहट पनि भगाउने गर्दछ । हाम्रो आत्मविश्वास बढाउने काम गर्दछ र सामाजिक व्यवहारमा संकोच कम गर्दछ ।
जब हामी कुनै अर्को व्यक्तिलाई भेट्छौ र कुरा गर्दछौ तब यो सबै कुराको असर हाम्रो भाषिक क्षमतामा पर्दछ । यो कुरा अहिलेसम्म बिना कुनै वैज्ञानिक आधारमै स्वीकार गरिँदै आएको थियो।
तर, युनिभर्सिटी अफ लिभरपुल, बेलायतको किंग्स कलेज र नेदरल्याण्डको युनिभर्सिटी अफ मास्ट्रिचका शोधकर्ताहरुले यो विचारलाई परीक्षण गरेर हेरे । परीक्षणका लागि ५० जना जर्मन नागरिकको एउटा समूह चयन गरियो, जसले हालै डच भाषा सिकेका थिए ।
केहीलाई पिउनका लागि मदिरा दिइयो, जसमा थोरै मदिरा थियो । उनीहरुको तौलको अनुपातमा मदिराको मात्रा दिइएको थियो । केहीको ड्रिङ्क्समा अल्कोहल थिएन । परीक्षणमा भाग लिने जर्मन नागरिकलाई नेदरल्याण्डका नागरिकसँग डच भाषामा कुरा गर्न भनियो ।
डच भाषीलाई यो थाहा थिएन कि कसले मदिरा सेवन गरेको छ र कसले छैन । परीक्षणबाट यो कुरा स्पष्ट भयो कि जसले मदिरा सेवन गरेको थियो, उसले राम्रो उच्चरणका साथ कुरा गरेका थिए । शोधकर्ताहरुले स्पष्ट गरेका छन् कि उनीहरुले यो परिणाम मदिराको निकै कम मात्राको खुराक दिएबाट प्राप्त भयो ।
गुडिरहेको एम्बुलेन्सबाट सात जना कोरोना संक्रमित भागे
महेन्द्रनगर , ९ बैशाख । कैलालीमा आइसोलेसन सेन्टरमा लैजाने क्रममा कोरोना पोजेटिभ सात जना एम्बुलेन्सबाटै भागेका छन्। बिहीबार गौरीफण्टा हुँदै नेपाल आएका सात जना भारतीय
राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन जेठ ६ गते, दल दर्ताको लागि वैशाख १४ गतेसम्मको म्याद
काठमाडौँ, ९ बैशाख। निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा सदस्य रामबहादुर थापा बादललाई कारवाही गरेपछि रिक्त रहेको स्थानमा जेठ ६ गते उपनिर्वाचन गर्ने भएको छ
अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सर्वसाधारणका लागि पशुपतिनाथ दर्शनमा रोक
काठमाडौँ, ९ बैशाख। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले सर्वसाधारणलाई पशुपति मन्दिर दर्शनमा रोक लगाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सर्वसाधारणका
रेड कार्पेटमा बलिउडका ५ अभिनेत्री यस्तो गरे
साहित्यकार अमरको “सोचें बाँच्ने आधार” गीत बजारमा
२०७८ सालमा यी राशिहरूको चम्किनेछ भाग्य, हेर्नुहोस् बार्षिक राशिफल
२०२० मा अधुरै रहेको विवाहलाई धेरै बलिउड सेलिब्रेटीले २०२१ मा पुरा गर्ने
आज अप्रिल फुल्स डे, यसरी सुरु भयो मूर्ख बनाउने चलन
कुन बार जन्मिएका मानिसको स्वभाव कस्तो ?